एमसीसीबारे चीनका लागि पूर्व राजदूत पौडेललाई बाबुरामको जवाफ : जिम्मेवार ब्यक्तिले भ्रमको आगोमा घिउ थप्न मिल्छ ? – Durbin Nepal News
एमसीसीबारे चीनका लागि पूर्व राजदूत पौडेललाई बाबुरामको जवाफ : जिम्मेवार ब्यक्तिले भ्रमको आगोमा घिउ थप्न मिल्छ ?
फाल्गुन १४, २०७८ ९:५४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एमसीसीलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप झन् झल् बढ्न थालेको छ । यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलको आलोचना गरेका छन् । पौडेलले एमसीसीमा रहेका सर्त झिकेर दिए लिन तयार रहेको हालको एमसीसीको सम्झौतामा भूरणनीतिक स्वार्थ जोडिएको पनि बताएका थिए .
भट्टराईले ‘जिम्मेवार मान्छेले भ्रमको आगोमा सत्यको पानी हाल्ने कि भ्रमको घिउ थप्ने ?’ भन्दै पौडेललाई प्रश्न गरेका छन् । ‘एउटा देशभक्तले सामरिक भूमरीमा फस्दै गएको देशलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू बीचमा गतिशील सन्तुलन कायम राखेर देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि एउटा सामरिक धुरीमा ढल्केर द्वन्द्वको भुमरीलाई मलजल गर्ने ? सबै गम्भीर बनौँ ’, उनले पौडेललाई कटाक्ष गर्दै भनेका छन् ।
पूर्वराजदूत पौडेलले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती सर्त मानेर स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । शुक्रबार काठमाडौमा एमसीसीबारे आयोजित खुला बहस कार्यक्रममा उनले एमसीसीमा रहेका सर्तहरू नेपाल सरकार र नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने खालका भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पौडेलले बताएका थिए । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै समयमा उनले अरु सिनियर सचिवहरु हुँदाहँदै उनलाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । उनले काम गर्न सक्ने कर्मचारी भनेर तारिफ समेत गरेका थिए । पछिल्लो समय पौडेल एमसीसीको विपक्षमा खुलेरै लागेका छन् भने भट्टराई जसरी पनि संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने अडानमा दुढ रहेका छन् ।